Goolhayihii Xulka qaranka Soomaaliya Axmed yare oo Geeriyoodey+Sawiro | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Goolhayihii Xulka qaranka Soomaaliya Axmed yare oo Geeriyoodey+Sawiro
Published on July 28, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(28-7-2018) Waxaa dhawaan la iisoo sheegay in uu Geeriyoodey alaha u Naxariisteey Goolahayihii xulka qaranka Soomaaliya iyo Kooxaha Elman iyo Jeenyo Axmed Cabadlla Macallin Maxamed kaas oo berayhaan ku Xanuunsanayey dalka Turkiga.
Axmed Cabadlla Macallin Maxamed oo in badan u saftay Xulka qaranka Soomaaliya isla Markaana ka mid ahaa Xiddigaha ugu fiican dhanka Goolhayenimada xiligii bur burka ayaa Geeridiisa waxaa ii xaqqijiyey Jibriil Xasan Fariid oo ay in badan kawada Tirsanaayeen Xulka qaranka Soomaaliya.
Goolahyahaan ayaa sidoo kale mid da.yar kaas oo dhashay 8 bishii Maarso 1993 dii waxaana uu soo maray marxalado kala duwan ilaa uu ka gaaray Goolhayaha koowaad ee Xulka dalkeena Soomaaliya Galabta ayuuse ku Geeriyoodey dalka Turkiga alaha u Naxariisto ayaan leenahay.
Tartamada Xulka Qaranka
2010-kii ayuu nasiib u yeeshay in uu xirto maaliyada qaranka,waxaana xulka uu u matalay tartanka CECAFA U-20 Championship kaas oo ka qabsoomay magaalada Asmara ee dalka Eritrea.
Kullankii ugu horeeyay ee uu qaranka u safto ayaa kusoo dhamaaday 0-0,waxa uuna wajahay xulka Sudan kaa soo dhacay 15-kii August 2010-kii.
Sidoo kale Axmed Cabdalla ayaa qaranka matalay Olombikada adduunka 2010 oo uu garoon ku yaala Jabuuti kula ciyaareen wadanka Sudan.
Sanadkii 2011 ayuu mar kale gashtay maaliyadda qaranka, kullan xulkeena uu ka hor tagay Itoobiya ciyaar ka tirsanayd is reeb reebka koobkii adduunka 2014 xiili Itoobiya aan kula ciyaarnay dalka Jabuuti.
Mar kale 2011-kii ayuu xulka u matalay CECAFA Tusker Challenge Cup, oo ka dhacay dalka Tanzania.
2012-kii ayuu xulkeena Wajahay Sudan tartankii 17 sanno jiradda ee CAF, xilligaas uu wadankeena ku adkaaday 1-0, waxaana shabaq illaaliye ahaa Axmed Cabdalla.
Markii Toddobaad ayaa u suura gashay in uu xirto maaliyadda qaranka, waxa uuna xulka u matalayay tartanka Cecafa Tusker Challenge Cup, oo ay maal gallinaysay Tusker, balse magac ahaan uu wato CECAFA Senior Challenge Cup.
2013 ayuu ahaa safarkii ugu dambeeyay ee uu Axmed Cabdalla matalo qaranka, waxaana tartankaas uu ka qabsoomay Kenya waxa uuna ahaa CECAFA Challenge Cup oo sanadkaas aan lagu xusin magacii Tusker oo maal gallin u taagnaa.